Vivaldi na-ekwuputa ọpụpụ nke beta iji ruo nsụgharị ikpeazụ | Gam akporosis
Vivaldi maka gam akporo si na beta pụta dị ka ihe nchọgharị Chromium nwere "taabụ ụdịdị desktọọpụ"
Vivaldi maka gam akporo enweela ezigbo oge na beta na nke a na-eme ka ọ dị mma kwuru na ha chọrọ na-arụ ọrụ a nchọgharị nke ọma na-abata dị ka otu n'ime Chromium nchọgharị nwere ihe nhọrọ maka customization.
Ejiri njirimara "Tabed" mara ya Site na desktọọpụ nsụgharị nke a ọtụtụ nchọgharị ndị dị otú ahụ dị ka na-ewu ewu Chrome ma ọ bụ Firefox, Vivaldi maka gam akporo abịarute na niile ọchịchọ ịghọ otu n'ime ngwa ọdịnala na kasị njọ udi. Ka anyị mata ụfọdụ n'ime ihe ndị kacha mma ya.
1 Vivaldi maka gam akporo ugbua ebe a na mbipụta ikpeazụ
2 Mgbe niile na-ahazi dị ka lei na-akpali na Vivaldi
3 Atụmatụ ndị ọzọ maka Vivaldi maka gam akporo
Vivaldi maka gam akporo ugbua ebe a na mbipụta ikpeazụ
Vivaldi bụ otu Ihe nchọgharị Chromium nwere ọtụtụ nhọrọ maka ịhazi ya, ọ bụrụhaala na anyị rịọrọ Opera maka ikikere ikwupụta otu. Ọ bụ afọ gara aga mgbe ọ bịakwutere anyị na beta na nkwa niile nke ịghọ ndị na-ama ndị mmadụ aka; n'agbanyeghị, n'ụzọ, echefula otú Kiwi Browser agaala emeghe a na-etinye koodu ya n'ime ọtụtụ ọnụọgụ nchọgharị gam akporo.
Ọ bịaruo n'ụdị ikpeazụ mgbe a nwalere ha ogologo oge nke anyị hụrụla etu ha si 'anwale' ọhụụ atụmatụ sitere na "snapshot wuo". Tumadi ọ na-eji na "desktọọpụ taabụ" ịke otú ghọtara na n'ihi na ndị nkanka na mgbasa ozi na trackers.
Mbụ niile anyị na-ekpe na na ụdị «desktọọpụ taabụ» nke bụ nnukwu ihe dị iche na ihe nchọgharị Chromium a mgbe anyị debere ya n'akụkụ ndị ọzọ. Ma mgbe ị na-agagharị agagharị, ọ nwere ike inye mmetụta na a na-emebi ohere nke enwere ike iji maka ihe ndị ọzọ, ọ bụrụ na mmadụ chọrọ ịgafe n'etiti otu taabụ na nke ọzọ maka ọrụ ma ọ bụ ahụmịhe nke gị, ihe nchọgharị a nwere ike bụrụ ọkacha mmasị gị.
Mgbe niile na-ahazi dị ka lei na-akpali na Vivaldi
Ka o sina dị, enwere ike ịgbachi ụdị taabụ ahụ iji weghara ohere ahụ maka usoro ndị ọzọ. Ọ bụrụ na anyị na-aga inyocha ndị fọdụrụ nke interface, ọ bụ nnọọ yiri ndị ọzọ. Adreesị ma ọ bụ ubi maka URL na elu, bọtịnụ maka menu Vivaldi dị n'aka nri ya, oghere etiti niile ka ịnyagharịa na ogwe ngwaọrụ ahụ ebe ntughari n'etiti taabụ, bọtịnụ azụ na azụ, ibe edokọbara, akụkọ ihe mere eme, nbudata na ịnweta ngwa ngwa ịchọọ na ịgha ụgha ngwa ngwa; n'eziokwu, ọ bụrụ na anyị pịa bọtịnụ ikpeazụ na ugboro abụọ, injin nchọ ahụ ga-emepe.
Anyị nwere ike ịme a aha pụrụ iche na interface maka otu ụzọ mkpirisi ma ọ bụ ọsọ ọsọ dị n'okpuru adreesị URL ahụ n'elu ma na-enye anyị ohere ịnweta ụdị obere mmanya maka ịnweta ngwa ngwa dịka ọ na-eme na ihe nchọgharị desktọọpụ.
Atụmatụ ndị ọzọ maka Vivaldi maka gam akporo
O nwekwara akara ngwa ngwa ma ọ bụ ọsọ ọsọ ahaziri nke ọma maka ịmasị anyị mgbe anyị mepere taabụ ọhụrụ. Anyị ga-ekwukwa banyere usoro njirimara ndị ọzọ dịka Ndetu agbakwunyere na ihe nchọgharị ahụ, nseta ihuenyo nke weebụsaịtị iji ikike "mpịakọta", mekọrịta ya na nrụnye ihe nchọgharị ndị ọzọ, na nkwado maka engines ọchụchọ dị iche iche.
Dị ka ọ na-adịghị nwere na ọchịchịrị mode, na nhọrọ ka ịgbanwee na desktọọpụ mode ma ọ bụrụ na anyị nwere a ibu mbadamba. N'otu oge ahụ ụlọ ọrụ ewepụtara ụdị nke Vivaldi nke 3.0 maka desktọọpụ, Ya mere ọ chọrọ ịpịsi ike ka ọ bụrụ nnukwu ihe ọzọ na ọtụtụ ihe nchọgharị ahụ nke na-enye anyị ohere ịmekọrịta ihe niile n'etiti desktọọpụ na ekwentị anyị.
Vivaldi maka gam akporo na njedebe ikpeazụ ya A na-enweta ya n'ihe dị ka awa ole na ole na fromlọ Ahịa Play. Ọ bụrụ na ịnwalebeghị ya, ugbu a bụ oge kachasị mma n'ihi na a na-ahazi ya nke ọma maka ụbọchị gị. Otu n'ime ihe nchọgharị ahụ nke ga-enye ọtụtụ ihe ị ga-ekwu maka afọ ole na ole sochirinụ, ị ga-atụ uche ya? Site n’ụzọ, ị nwere snapshots ugbua iji nwalee ya tupu.
Vivaldi Nchọgharị Snapshot
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Vivaldi maka gam akporo si na beta pụta dị ka ihe nchọgharị Chromium nwere "taabụ ụdịdị desktọọpụ"
Overlord anime abịarute na Mass maka Ndị Nwụrụ Anwụ maka gam akporo na ọgụ dabeere na ya
[Vidio] Otu esi ahazi olu mpịakọta nke ekwentị iOS gị, MIUI, Oxygen, EMUI, Otu UI na ndị ọzọ